5 Tsiambaratelo momba ny fitomboan'ny fitorahana bilaogy avy amin'ny Semalt
Ny famoronana lahatsoratra miparitaka dia ny laharam-pahamehana ho an'ireo rehetra nanangana bilaogy. Raha ny tena izy,Mitaky fihetsiketsehana tsy miovaova izany, izay mifamatotra foana. Avy amin'ny famoronana kalitaony votoatin'ny fampivelarana ny tetikady ara-media sosialy, ny dingana rehetra dia tsy maintsy ilaina. Ivan Konovalov,Mpanantanteraka Success Manager Semalt Digital Services dia mizara torohevitra mahasoa momba ny fampitomboana ny fifamoivoizana amin'ny blaogy.
1. Mamorona Content Viral
Manorà lahatsoratra mahaliana sy mahaliana izay hisarika ny sain'ny mpamaky - quora valuation services. Ny lohatenin'ny lahatsoratraono zavatra manan-danja indrindra amin'ny fanoratàna votoaty viraliny. Miaraka amin'ny anaram-boninahitra mahafinaritra izaymanaisotra ny sain'ny mpitsidika amin'ny aterineto. Raha manonona ny lohateninao, dia ho betsaka indrindra ianaoAzo inoana fa hahazo fitsapana ambony indrindra amin'ny lahatsoratrao ianao. Ankoatra ny famoronana lohateny tsara, soraty lahatsoratra marim-pototra.Midira ao amin'ny antsipirian'ny lohahevitrao ary hazavao amin'ny fomba mahaliana ny hevitrao. A elaboratedlahatsoratra dia handrisika ireo mpitsidika bilaoginao hamaky ny lahatsoratra manontolo. Mampiditra sary tsara tarehy ao amin'ny anaolahatsoratra mba hanampy ny mpamaky hahatakatra tsara kokoa ny lahatsoratrao. Ho vokatr'izany, ny mpamaky anao diaJereo ny blôginao mba hamaky ny lahatsoratra manaraka.
2. Mizara ny lahatsoratrao mihoatra ny indray mandeha
Raha te hampandroso ny fifamoivoizana ao amin'ny blôginao ianao, dia mila mifantoka kokoa ny mpitsidika. Ny mpamaky sasany dia miditrany aterineto mandritra ny andro sy ny hafa mandritra ny alina. Ampitomboy ny fifamoivoizana amin'ny blôginao amin'ny alalan'ny fizaranany lahatsoratrao imbetsaka mandritra ny iray andro na iray volana. Ireo sehatra media sosialy izay afaka manampyHanatanteraka izany ianao dia Facebook, Twitter, Pinterest, ary Google+. Mifandraisa vondrona sy fiarahamoninaizay mifandray amin'ny indostria ary mizara ny sakafo..
3. Hametraka ny lohahevitra tsara
Misy lohahevitra an'arivony eo amin'ny tsena. Na izany aza, maro amin'izy ireo dia tsy mety mifanaraka amin'ny anaoblog. Midika izany fa tsy maintsy mifidy amim-pahendrena ianao ary mametraka ny tsara. Tsara ny foto-kevitra tsaraizay manome antoka fa ny blôginao dia azo jerena amin'ny fitaovana samihafa, toy ny desktopary fampisehoana finday. Tokony hifidy lohahevitra haingana koa ianao. Rehefa lany haingana ny foto-kevitrao,Mampifandray ireo mpitsidika manodidina ny blôginao izany ary mamaky lahatsoratra hafa. Ankoatra izany, mifidiana lohahevitra iray izaytsara tarehy sy mahafinaritra.
Manampy anao hampiasa ny tanjaky ny sehatry ny media sosialy ny bokotra iombonana mba hahazoana mpihaino bebe kokoa.Ny mpamaky dia vonona ny hizara lahatsoratra mahaliana. Ampio àry ny bokotra anjara amin'ny lahatsoratrahamela ny votoatinao hivezivezy. Midika izany fa afaka mizara ny hafatra amin'ny blôginao ireo mpamaky anaoireo namany sy mpankafy. Ho vokatr'izany fizarana izany, ny bolonganao dia hahazo fifamoivoizana bebe kokoa.
5. Fanehoan-kevitra ao amin'ny blôgy hafa
Nanjary fitaovana mahery vaika ny valim-panontaniana, izay manampy anao amin'ny famerenana rindran-dalana sy fifamoivoizana. Tadiavobilaogy malaza ary fanehoan-kevitra momba ny loha-hevitra sy ny sehatra fiadian-kevitra. Ny fanehoan-kevitra mahavariana dia hisarika ny saina,ary azo inoana fa hahazo valiny izay manome anao backlinks ianao. Ny fanamarihana dia hametraka anao ho toy nymanam-pahaizana ary hanampy anao hanintona fifamoivoizana maro ao amin'ny blôginao.
Ny manam-pahaizana momba ny Semalt Ivan Konovalov dia manaporofo fa ny fampiharana tsy misy fepetra voalaza etsy ambony dia mitarikaho fampitomboana ny fifamoivoizana blôgy. Ny fanao toy izany dia noraisin'ny mpanjifantsika tamim-pahombiazana ary nohamafisinany fahombiazany. Hatramin'izao, afaka mampiasa ireo toro-hevitra ireo ianao ary koa tolotra matihanina Semalt haka ny blôginao ho amin'ny manaraka.